တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုသူဦးရေ များပြားလာခြင်းကြောင့် စာစစ်ဌာန တစ်ခုလျှင် ဦးရေ ၁၂၀၀ အထိ ထည? - Yangon Media Group
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုသူဦးရေများ ပြားလာသည့်အတွက် စာစစ်ဌာနတစ်ခုလျှင် စာဖြေသူဦးရေ ၁၂၀၀ အထိထည့်သွင်းဖြေဆိုစေမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် စာစစ်ဌာနတစ်ခု၌ စာဖြေသူဦးရေ ၁၂၀၀ ကို ထည့်သွင်းဖြေဆိုစေမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့သတ်မှတ်ရခြင်းမှာ တက္ကသိုလ်ဝင် တန်း ဖြေဆိုသူဦးရေသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုများပြားလာသည့်အတွက် စာစစ်ဌာနအရေအတွက်များကိုလည်း တိုးမြှင့်ချထားသလို စာစစ်ဌာနများအတွင်း စာဖြေသူဦးရေကို တိုးမြှင့် ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့် စာဖြေသူများလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲမှသိရသည်။
“မနှစ်ကစပြီးတော့ စာစစ်ဌာနတွေကိုတိုးပေးရသလို၊ စာဖြေသူ ဦးရေးကိုလည်း စာစစ်ဌာနတစ်ခုမှာ ၁၂၀၀ အထိ တိုးပေးခဲ့တယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာဖြေသူဦးရေက ပိုပိုများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒီနေ့လုပ်တဲ့ပွဲက တာဝန်ယူကြီး ကြပ်ရမယ့် ဆရာ၊ ဆရာမကြီးတွေကို မသိထားရတာမရှိအောင်ခေါ် ပြီး ဆွေးနွေးပေးတာပါ။ အရင်နှစ် တွေကတစ်နှစ်ကို နှစ်ရက်လောက် ပဲလုပ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်တော့သုံးရက် လုပ်ပြီး ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ကြုံရ တဲ့အခက်အခဲတွေကို အသေးစိတ် ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာနမှ အရာ ရှိတစ်ဦးက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၏ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် တာဝန်ယူကြီးကြပ်ရမည့်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့် လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ၊ စာဖြေသူများလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကို ယခုလ ၂၅ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကို အောက်မြန်မာ ပြည်မှ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၂၀၀ ကျော် တက်ရောက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဖုန်းတွေကို ချထားလိုက်ပြီး လူတွေအချင်းချင်း ဆက်သွယ်စကား ပြောဆိုစေချင်တဲ့ ဂျန်နီဖာ အနစ္စတန??
ဂျာမနီနှင့်ခြေစမ်းပွဲတွင် ပွန်ပီပန်းများ ဝတ်ဆင်ခွင့် ဖီဖာထံ အင်္ဂလန်အသင်း တောင်းဆိုထား
တောင်ဥက္ကလာပတွင် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မှ လမ်းကူးသူ အမျိုးသမီးကို တိုက်မိပြီး လူ၊ ဆိုက်ကားနှင့် ဆိ??